Maamulada Galmudug iyo Puntland oo soo saaray go'an wadajir ah
HomeWararka SomaliyaGalmudugMaamulada Galmudug iyo Puntland oo soo saaray go’an wadajir ah
Maamulada Galmudug iyo Puntland oo soo saaray go’an wadajir ah
February 13, 2021 Galmudug, Puntland, Wararka Maanta, Wararka Somaliya 0
Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug gaar ahaan qeybta Galmudug ayaa ku yeeshay Guddiga amniga Gobolka Mudug, kaas oo ay ka qeyb-galeen mas’uuliyiin ka kala socday Maamulada Puntland iyo Galmudug.
Shirka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Gudodomiye kuxigeenka Gobolka Mudug ee Puntland laba duq ee Magaalada Gaalkacyo ee Maamulada Puntland & Galmudug lamaha amniga talisyada booliska labada Maamul iyo Xubno kale.
Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal ayaa sheegay in shirka uu kusoo dhamaaday Guul, isla markaana ay uga hadleen dhacdooyinkii dhacay Saddexdii Todobaad ee la so dhaafay, waxaana uu sheegay in amniga uu yahay mid wanaagsan.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in shirka lagu go’aamiyay sidii looga hortegi lahaa weerarada ay geystaan Ururka Al-Shabaab iyo la dagaalanka waxyaabaha maanka dooriya oo ka qeyb-qaadanaya amni darrada Gobolka Mudug.
Ugu dambeyn Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee Galmudug waxaa uu sheegay in la isku raacay in labada Ciidan ee Puntland & Galmudug ay siwadajir ah u wada howlgallaan si loo xaqiijiyo guud ahaan Amniga Gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo.
Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug iyo degaannada kale ee Gobolkaas ayaa waxaa mararka qaar ka dhaca weeraro ay geystaan Al-Shabaab iyo Colaad Beeleedyo soo laab laabta.
Sawiro:- Qaraxii Ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Muqdisho goor dhow
Galmudug iyo Dowlada Somaliya oo heshiis dhex dhigay Beelaha ku dagaalamay Deegaanka Xanan-buure